स्थानीय सरकारः संकटमा बढ्यो वडा अध्यक्षको व्यस्तता
राजाराम डंगोल/धादिङ, २८ वैशाख । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट अन्यत्रजस्तै ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्वर १ मा धेरै क्षति भयो ।भूकम्पबाट वडामा ८ सय ७२ घरमा क्षति पुग्यो । तर लाभग्राही सूचीमा ६ सय हाराहारीमा मात्र नाम आयो ।
बाँकी भूकम्पपीडितले वडा कार्यालयमा अन्याय भएको भन्दै नाम आउनुपर्नेमा दबाब दिनथाले । हुन पनि समस्यामा परेका भूकम्पपीडितहरुको आवाज जायज भएको भन्दै वडाअध्यक्ष रामप्रसाद सिलवालले विभिन्न निकायमा भनसुन गर्ने, जिल्लाका नेताहरुलाई समस्या राख्ने काम गरिरहे । तर, नतिजा केही भएन ।
यस्तै अवस्थामा वैशाख २०७६ असोज १५ गते बुधवार ज्वालाखुमी गाउँपालिका वडा नम्वर १ को वडा कार्यालय ठूलोचौर मैदीमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम भयो ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जिल्लामा सञ्चालन गर्दै आएको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनस्थापनामा सदाचार (आईपिइआरआर) कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम भएको थियो ।
कार्यक्रममा अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवन तथा शिक्षाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेपछि उपस्थिति भुकम्पपीडितले आफ्ना वेदना तथा समस्याका विषयमा फेरी प्रश्न गरे । त्यस क्रममा कतिपय सहभागीले वडा कार्यालयले पहल नगरेको समेत आरोप लगाए । लामो समयसम्म सवालजवाफ चल्योे । सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए, कार्यक्रम सकियो ।
त्यसपछि वडाअध्यक्ष रामप्रसाद सिलवालको व्यस्तता पहिलेभन्दा बढेर जानथाल्यो । गाउँमा धेरैभन्दा धेरै भूकम्पपीडितका समस्या रहेको अवस्था छ तर वडाअध्यक्ष रामप्रसाद सिलवालको काम भने धेरै बाँकी थिए । भुकम्पपीडितको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? यसका साथै बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा परेका ३ सय ३५ जनाको समस्या कसरी छिटो समाधान गर्नेे लगायतका विषयमा व्यस्तता बढ्यो ।
यसअघि पनि त्यस्ता समस्या वडा कार्यालयमा दैनिक रुपमा आउने गरेका भए पनि उनले त्यसलाई आफ्नै ढंगबाट पहल गर्दै आएका थिए तर सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमपछि भने उनले नियमित सम्पर्क गर्ने, जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयमा फोन गर्ने, समस्या समाधानका लागि कस्ता पहल भइरहेको भन्ने विषयमा बुझ्ने गर्दै आएका छन् ।
यतिसम्मकि समस्या समाधानकालागि उनी गत चैत्र ८ गते मात्र प्रदेशसभा सदस्य डा. रामकुमार अधिकारी, संविधानसभासद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीलाई सँगै लिएर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यालयमा समेत पुगे । कार्यालयमा पुगेर वडाको समस्या राखेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले धेरै ठाउँमा यस्ता समस्या रहेकाले वास्तविक भुकम्पपीडितलाई नछुटाईकन काम गर्ने तयारी भइरहेको आश्वासन दिए । ज्ञवालीको आश्वासनपछि आफूलाई केही आशा लागेको वडाअध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् ।
‘मलाई यो कार्यक्रमले काम गर्ने हौसला बढेको छ । यसअघि पनि समस्या समाधानको लागि पहल नगरेको होइन तर यस कार्यक्रममा सहभागी भुकम्पपीडितको भनाईले मलाई छिटो काम गर्ने, समस्या समाधान गर्ने विषयमा घचघच्याएको जस्तो लागेको छ,’ उनले भने ।
वडाअध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, ‘काम ढिलो होला केही छैन तर म भूकम्प र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्छु ।’ वडाअध्यक्षको कामप्रति भुकम्पपीडित पनि केही सन्तुष्ट नै छन् । भलै समस्या समाधान भइसकेको छैन । वडाअध्यक्षले सम्बन्धित निकायमा गरेको पहल र दौडधुपबाट भने उनीहरु सन्तुष्ट रहेका छन् ।
‘हाम्रो समस्या समाधान त भएको छैन तर पनि वडाअध्यक्षले हाम्रो समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुभएको छ, जिल्लादेखि केन्द्रसम्म कुरा पुर्‍याउनुभएको छ, सांसदको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, आशा छ हाम्रो समस्या ढिलै भएपनि अब समाधान हुन्छ होला’ भूकम्पपीडित कमल सिलवाल भन्छन् ।
तर देशमा देखिएको अहिलेको कोरोना समस्याले यी काममा बाधा उत्पन्न गराएकोमा उनी थप चिन्तित देखिए ।